Antibiotika mahery vaika ny vancomycin? - BALLYA
Posted on Janoary 30, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona no atao hoe vancomycin?
Vokatry ny vancomycine
Ny formula molekiola Vancomycin dia C66H74ClN9O24. Vancomycins dia antibiotika glycopeptide, ao anatin'izany vancomycin, norvancomycine ary teicoplanin. Ny Vancomycin dia mamatotra ny alanine amin'ny faran'ny peptidoglycan, izay mialoha ny rindrin'ny sela misy bakteria mora tohina miaraka amina firaisana lehibe, manakana ny tsy fitovizan'ny peptidoglycan milanja molekiola avo izay mandrafitra ny rindrin'ny sela bakteria, ka mahatonga ny lesoka amin'ny rindrin'ny sela ary mamono ny bakteria, indrindra ho an'ny bakteria izay be dia be. Ho fanampin'izany, manakana ny tsy fitovizan'ny RNA amin'ny cytoplasm koa izy io.
Ny vancomycins dia misy fiantraikany mahery amin'ny bakteria amin'ny bakteria miabo tsara, ao anatin'izany ny staphylococci mora tohina ary ny staphylococcus aureus (MRSA) mahazaka methicillin ary ny staphylococcus epidermidis (MRSE) mahazaka methicillin. Norvancomycin sy Teicoplanin dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny ankamaroan'ny Staphylococcus aureus noho ny vancomycin, ary ny vokany amin'ny Staphylococcus epidermidis dia mitovy amin'ny vancomycin; ny norvancomycin no antibiotika fanoherana ny anaerobika matanjaka indrindra manohitra ny Bacteroides fragilis, ary misy fiatraikany mahery amin'ny tsinay sy vokany mahery kokoa amin'ny coco noho ny teicoplanin.
Ny antsasaky ny ainy Vancomycine: 4 ~ 8 ora, 9 andro tsy fahombiazan'ny voa, tsy mahomby amin'ny bakteria anaerobika sy bakteria gram-negatif, hemodialysis dia tsy hanala Vancomcin. Vancomycin dia manana tanjaka mahery sy nephrotoxicity. Hampiasaina io raha tsy mandaitra amin'ny mikraoba ny antibiotika hafa. Io ilay antsoina hoe fanafody farany. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, noho ny fanararaotana mahery vaika ny antibiotika, dia mipoitra ny bakteria mahatohitra vancomycine, toy ny enterococcus-resistence vancomycin (VRE), izay miteraka ahiahy miafina amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ireo areti-mifindra.
Izy io dia afaka manakana ny tsy fitambaran'ny rindrin'ny sela bakteria, misy fiatraikany mahery eo amin'ny Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, sns., Ary misy fiatraikany tsara amin'ny Bacillus difficile, Bacillus anthracis, ary Bacillus diphtheria. Tsy misy fanoherana ny antibiotika hafa ary vitsy ny karazana fanoherana. Ny Vancomycine dia tsy tototra am-bava, tsy maintsy esorina amin'ny rano izy io ho an'ny tsindrona alohan'ny fampidirana intravena, ary ny fotoana fampidirana dia tsy tokony ho latsaky ny 1 ora. Ny fampidirana intravena loatra izay haingana dia mety hiteraka fihetsiky ny hoditra, ary ny fifantohana mafy loatra dia mety hiteraka thrombophlebitis; ny tsindrona intramuskular dia mety miteraka fanaintainana mafy, ka tsy avela ny tsindrona intramuskular; manana ototoxisialy mahery vaika sy nephrotoxicity izy io, noho izany dia tokony hampiasaina hamonjy fotoana fohy ihany.
Ny Vancomycin dia nosarahan'i EC Kornfeld (mpiasan'i Lilly) voalohany tamin'ny tany lalina tao anaty ala Borneo nangonin'ny misiônera iray. Ilay bakteria mpamokatra vancomycine dia nantsoina hoe Amycoplasma orientalis ihany tamin'ny farany. Ny tanjon'ny fampiasana vancomycine dia ny fitsaboana ireo aretina vokatry ny Staphylococcus aureus mahazaka penicillin.
Vetivety dia nanjary niharihary ny tombony azo avy amin'ny vancomycine: na dia eo aza ny zana-trondro maro amin'ny media misy vancomycine dia tsy mbola naneho fanoherana miharihary ny staphylococci. Tamin'izany fotoana izany dia mihabe ny staphylococci lasa mahatohitra penisilinina antibiotika, izay nanao vancomycine dia nahazo fankatoavana avy hatrany tamin'ny 1958 tamin'ny voalohany i Eli Lily ary namokatra vancomycine tamin'ny anarana hoe Vancocin (marin-toerana sy azo itokisana).
Na izany aza, ny vancomycin dia tsy mbola lasa fanafody laharana voalohany amin'ny fitsaboana aretina Staphylococcus aureus, satria ny vancomycine dia tsy maintsy atao intravennaire ary tsy azo tsentsina am-bava. Ny fampandrosoana haingana ny anti-beta-lactamase ny fanafody penicillin semi-synthetic, toy ny methicillin (sy ireo vokatra ho solony toy ny ethoxynaphthalene (amine) penicillin, o-chloropenicillin, sns.) dia mety hanakana ny bakteria fanoherana ny penicillin. Ny vancomisinina fahadiovana ambany izay nampiasaina tamin'ny andrana voalohany dia manana ototoxisialy mahery vaika sy nephrotoxicity. Noho izany, ny vancomycin dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny methicillin sy ireo aretina hafa azo tsapain-tanana Staphylococcus aureus.
Tamin'ny 2004, Eli Lilly dia nanome alalana ny marika Vancocin ho an'i Viro Pharma any Etazonia, Flynn Pharma any UK ary Aspen Pharmacare any Aostralia. Ny patanty vancomycine dia tapitra tamin'ny fiandohan'ny taona 1980, saingy tsy navelan'ny FDA hamidy tany Etazonia ny vancomycine novokarin'ny iray tamin'ireo orinasa mpamokatra fanafody telo. Betsaka ny ozinina fivarotam-panafody any Shina izay mamokatra fanafody vancomycine generic, ny anaran'ny mpivarotra dia Fangkerin sy Wanxun (norvancomycin).
3. Pharmacology sy Toxicology
Vancomycin dia misy fiantraikany tsara amin'ny bakteria amin'ny ankamaroan'ny bakteria miabo tsara, anisan'izany ny Staphylococcus aureus ary ny fihenan'ny coagulase-ratsy Staphylococcus methicillin mora tohina sy mahatohitra, Streptococcus isan-karazany, Streptococcus pneumoniae ary Enterococcus.
Ny vancomycine dia tsy tototra am-bava, amin'ny fatra tokana 400 mg intravenous, ny haavon'ny rà ambony indrindra (Cmax) 25.18 mg / L dia ho tratra aorian'ny fampidirana azy, ny haavon'ny rà salama ao anatin'ny 8 ora dia 1.90 mg / L, ary ny vokany ny fifantohana rà dia azo tazomina mandritra ny 6 ka hatramin'ny 8 ora.
Iray mitete intravenous 800 mg, ny haavon'ny rà ambony indrindra dia 50.07 mg / L. Ity vokatra ity dia azo zaraina betsaka amin'ny sela sy tsiranoka samihafa amin'ny vatana, saingy tsy mora ny miditra ao amin'ny vatan'ny ati-doha, ary ny habetsahan'ny bile dia tena kely tokoa. Aorian'ny fampidirana intravena dia avoaka amin'ny alàlan'ny voa. Ny fampidirana intravena iray 400 mg dia miteraka tahan'ny famoahana ny urine 24 ora 81.1%; fampidiran-dra intravenous 800 mg, tahan'ny famoahana ny urine 24 ora 85.9%.
1. Vancomycine Coverage
Ny vancomycine dia voafetra amin'ny aretin'ny rafitra ateraky ny Staphylococcus aureus (MRSA) mahazaka methicillin sy ny aretin-tsinay ary ny aretin'ny rafitra vokatry ny Clostridium difficile; penisilinina or cephalosporins Tsy tokony hampiasaina amin'ny alikaola penicillin ho an'ireo marary voan'ny staphylococcal mahery izay tsy nahomby tamin'ny fitsaboana antibiotika etsy ambony, dia azo ampiasaina ny norvancomycine. Vancomycin koa dia ampiasaina amin'ny fitsaboana endocarditis enterococcal sy corynebacterium (toy ny diphtheria) endocarditis amin'ny olona mahazaka penicillin.
Mamono bakteria amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fitomboany sy ny fiterahana. Ny Vancomycine dia manelingelina ny fifangaroan'ny rindrin'ny sela amin'ny alàlan'ny fanelingelenana ny singa fototra amin'ny rafitry ny sela bakteria, peptidoglycan, ary manakana ny famokarana phospholipid sy polypeptides ao amin'ny rindrin'ny sela.
Vancomycin dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretina amin'ny lafiny efatra: voalohany, ny fitsaboana ny aretina azo avy amin'ny bakteria mahatohitra zava-mahadomelina; ho fanampin'izany, ampiasaina koa amin'ny fitsaboana enteritis pseudomembranous mahazaka antibiotika ateraky ny difficile Clostridium.
Ny vancomycine dia azo ampiasaina ihany koa hitsaboana ny colitis sy ny fivontosan'ny tsinay; Ny vancomycine dia matetika koa ampiasaina mba hisorohana ny aretina rehefa mametraka kateteran'ny fo, katetika ary fitaovana hafa. Vancomycin dia azo ampiasaina irery na miaraka.
Izy io dia afaka manakana ny tsy fitambaran'ny rindrin'ny sela bakteria, misy fiatraikany mahery eo amin'ny Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, sns., Ary misy fiatraikany tsara amin'ny Bacillus difficile, Bacillus anthracis, ary Bacillus diphtheria.
Tsy misy fanoherana ny antibiotika hafa ary vitsy ny karazana fanoherana. Ampiasaina indrindra amin'ny endocarditis, sepsis, enterite pseudomembranous, sns.
Ny fanafody dia tsy tototry ny fitantanana am-bava. Tsy maintsy esorina amin'ny rano amin'ny tsindrona alohan'ny fampidirana intravenous izy io, ary ny fotoana fampidirana dia tsy tokony ho latsaky ny 1 ora. Ny fampidirana intravena loatra izay haingana dia mety hiteraka fihetsiky ny hoditra, ary ny fifantohana mafy loatra dia mety hiteraka thrombophlebitis; ny tsindrona intramuskular dia mety miteraka fanaintainana mafy, ka tsy avela ny tsindrona intramuskular; manana ototoxisialy mahery vaika sy nephrotoxicity izy io, noho izany dia tokony hanavotana vetivety fotsiny ihany.
Vancomycin hydrochloride dia matetika ampiasaina 2g isan'andro (titer), izay azo zaraina ho 500mg isaky ny 6 ora na 1g isaky ny 12 ora. Ny fampidirana intravena dia maharitra 60 minitra. Azo ampitomboina na hihena arakaraka ny taona, lanja ary soritr'aretina.
Ho an'ireo be antitra, 500 mg isaky ny 12 ora na 1 g isaky ny 24 ora, mavesatra mandritra ny 60 minitra mahery isaky ny mandeha. Ny ankizy sy ny zaza dia atsofoka amin'ny 40mg / kg isan'andro in-2-4, isaky ny mihoatra ny 60 minitra. Ny fatra ho an'ny zaza vao teraka dia 10-15 mg / kg isaky ny mandeha, ny zaza vao teraka ao anatin'ny herinandro iray nahaterahana dia omena indray mandeha isaky ny 12 ora, ny zaza vao teraka iray herinandro ka hatramin'ny iray volana teraka dia omena indray mandeha isaky ny 8 ora, ary ny fampidirana intravena dia mihoatra ny 60 minitra.
Ny fomba fiomanana dia ny manampy rano 10mL ho an'ny tsindrona ao anaty tavoara misy vancomycine 0.5g hanalefaka, arotsaka amin'ny sira 100mL na tsindrona glucose 5% farafaharatsiny, ary ny fotoana fampidirana intravenous dia mihoatra ny 60 minitra.
Ny aretin-koditra, ny maloiloy, ny phlebitis, sns.
Ny vancomycine dia mety hiteraka tinnitus koa, ny fihainoana ary ny fahasimban'ny voa.
Ny marary sasany dia mety mbola manana leukopenia ra miparitaka amin'ny peripheral ary aminotransferase serum avo.
Ny tsindrona haingana dia mety hiteraka fihenan'ny alika, fihenan'ny tosidra, ary ny fisamborana koa ny fo, ary koa ny fery, dispnea, aretin-koditra, mena ny vatana ambony (soritr'aretin'ny vozona mena), aretin-tratra sy hozatra, sns.
Ny olona tsy mahazaka antibiotika vancomycine dia tsy mahazo mampiasa vancomycine.
Ny vancomycine dia tsy azo tsindrona amin'ny intramuscularly na intravenous.
Ny hafainganan'ny fitetezana intravenous dia tsy tokony ho haingana loatra. Ny fatra tsirairay (0.4 ～ 0.8g) dia tokony haidina tsimoramora aorian'ny famonoana farafahakeliny 200ml 5% tsindrona glucose na tsindrona sodium klorida. Ny fotoana mitete dia tokony ho 1 ora mahery.
Ny marary tsy ampy amin'ny voina dia tokony mampiasa vancomycine am-pitandremana. Raha misy famantarana ampiasaina, dia tokony ampiasaina eo ambanin'ny fanaraha-maso ny fifantohana zava-mahadomelina ara-pahasalamana (TDM) arakaraka ny fihenan'ny fihenan'ny fiasan'ny voa.
Fanelingelenana amin'ny diagnostika: mety hitombo ny azota urea ra.
Mandritra ny vanim-potoana fitsaboana dia tokony hojerena matetika ny fihainoana, ny proteinina momba ny urine, ny cast, ny isan'ny sela ary ny hakitroky ny pipy.
Ny "superbug" NDM-1 izay niseho tany amin'ny firenena Azia atsimo toa an'i India dia niely tany amin'ny Fanjakana Mitambatra, Etazonia, Kanada, Aostralia, Netherlands ary firenena hafa, ary olona 170 no voan'ny virus eran'izao tontolo izao. Raha ny fanadihadian'ny haino aman-jery amerikana, na dia mampatahotra aza ity bibikely be ity, dia tsy azo atao ny mifehy ny fiparitahany. Ny manam-pahaizana eto an-toerana dia mino koa fa ny bakteria lehibe dia tsy ho mahery setra toy ny gripa A, ary tsy mila taitaitra.
He Jianfeng, talen'ny Ivon-toeran'ny Epidemiolojia, Ivon-toerana misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina any Guangdong, dia nilaza fa ny superbug NDM-1 dia fiovana ara-pirazanana amin'ny anzima, izay mora mifangaro amin'ny bakteria ary lasa mitondra bakteria, izay afaka alaina tahaka ary aparitaho. Ny superbugs dia mahatohitra antibiotika maro, fa raha ny valin'ny fikarohana dia mbola mandaitra amin'izany ny vancomycine. Ny hopitaly lehibe dia manana tahiry ary afaka mampiasa azy raha ilaina. Na izany aza, na dia mandaitra amin'ny fitsaboana bakteria fanoherana fanafody aza ny vancomycine dia tsy fantatra ny fahombiazany.
Raha ny filazan'ny manam-pahaizana dia bakteria mahery no mahazaka saika ny antibiotika rehetra, ary ny antibiotika tsara indrindra dia tigecycline ary vancomycine. Raha tena mihanaka ny mikraoba dia hahazo tombony amin'izany ny tahiry fanafody.
Araka ny fomban-drazana, ny vancomycine dia nampiasaina ho "laharana farany fiarovana" ho an'ny antibiotika, ary amin'ny ankapobeny dia sokajiana ho "antibiotika tertiary", ampiasaina hitsaboana aretina lehibe izay tsy mandaitra amin'ny antibiotika rehetra, ao anatin'izany ny voaloboka mavo volamena izay mahazaka methicillin.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, noho ny fanararaotana be loatra ny antibiotika, dia nipoitra ny bakteria izay mahazaka vancomycine, toy ny enterococcus resisten-resisten-vancomycine (VRE), izay miteraka ahiahy miafina amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ireo aretina mifindra. Ny satanany dia nidina tsikelikely tamin'ny alàlan'ny zava-mahadomelina vaovao mankany amin'ny "zava-mahadomelina farany" miady amin'ny aretina.
Vancomycin dia efa noheverina ho "fanafody farany". Izy io dia miraikitra amin'ny sombin-tsiranoka proteinina manangana ny rindrin'ny sela-peptides mba hisorohana ny bakteria tsy hamokatra rindrin'ny sela ary hahafaty azy ireo. Na izany aza, ny bakteria dia nitombo hatrany koa ny fanoherana ny zava-mahadomelina, nampihena ny fahafahan'ny vancomycine hifatotra amin'ny tanjona.
Androany, mihombo ny risika aretin'ny enterococci-resistance vancomycin sy Staphylococcus aureus. Raha ny angom-baovao avy amin'ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina dia manodidina ny 23,000 ny amerikana maty noho ny otrikaretina bakteria 17 mahatohitra antibiotika isan-taona.
Vancomycin, a polypeptide antibiotika mitovy amin'ny polymyxine B, dia matetika ampiasaina ho ny laharana farany fiarovana amin'ny aretina mikraoba, ary matetika tsy ampiasaina amin'ny fampiharana ara-pahasalamana.
BALLYA manome a fitsapana ballya-vancomycin hilaza aminao raha misy vancomycin residues amin'ny sakafo sy sakafo.